Granit Xhaka oo jawaab ka bixiyay wararka xanta ah ee la xiriirinaya inuu ku biirayo Inter Milan – Gool FM
(London) 17 Juunyo 2019. Xiddiga reer Switzerland iyo kooxda Arsenal ee Granit Xhaka ayaa jawaab cad ka bixiyay wararka la xiriirinaya inuu ku sii dhawaanayo ku biirista naadiga Inter Milan, kaddib seddex xilli ciyaareed oo uu la joogay Gunners.
Wargeysyada Ingariiska iyo Talyaaniga ayaa sheegay in Granit Xhaka uu ku biirayo kooxda reer Talyaani ee Inter Milan, sababa la xiriira inuusan ku qanacsaneyn tababare Unai Emery qaab ciyaareedkiisa.
Inkastoo qaar ka mid ah ilo saxaafadeed ay xaqiijiyeen in Arsenal ay weydiisatay qiimo dhan 55 milyan euro si ay isaga iibiso Xhaka, haddana xiddiga heerka caalami ee reer Switzerland ayaa wuxuu ka baxay aamusnaanta wuxuuna beeniyay dhammaan wararka xanta ah.
Granit Xhaka ayaa wareysi uu ku bixiyay RADIO GAZZETTA ayaa wuxuu ku beeniyay wararka xanta ah ee la xiriirinaya kooxda Inter Milan.
“Waxay ahaayeen warar lagu qoray wargeysyo qaar, balse waxay ku egyihiin wargeysyada oo kaliya, waxna ma dhicin”.
“Ma jirto mas’uul ka tirsan kooxda Inter Milan ee si rasmi ah ila soo xiriiray, ama wada hadalo ila yeeshay ilaa iyo hadda, waxaan heystaa qandaraas Arsenal ah, mana doonayo inaan ka tago xilligan”.